Igumbi elizimele eduze nolwandle e-Conchal # 4 - I-Airbnb
Igumbi elizimele eduze nolwandle e-Conchal # 4
Playa Brasilito - Cabo Velas - Santa Cruz, Guanacaste , i-Costa Rica
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Ana Iris
Indawo ilungele abantu abafuna ukwazi ibhishi le-paradisiacal Conchal, kanye neBrasilito nendawo eyizungezile. Itholakala kumamitha angama-300 nje ukusuka olwandle eBrasilito kanye nemizuzu eyi-10 noma eyi-15 ukusuka eConchal ehamba esihlabathini (engenakungenwa yizimoto)
I-Brasilito iyindawo enamasu, eduze namabhishi amahle kakhulu, njengeConchal, Flamingo, Penca kanye nePotrero. Imizuzu engu-20 ngemoto ukusuka eTamarindo, Playa Grande, Pirate Bay, Minas, Puerto Viejo, Danta naseDantita
Isikhala sitholakala esitezi esiphansi se-multi-unit complex.
Liyikamelo elincane, elokulala. Ifakwe umbhede owodwa, ikhishi elincane elinezisekelo zokupheka, indawo yokugezela yangasese, i-TV kanye nesiqandisi.
Indawo inamakamelo okulala ama-3 phansi futhi wonke anomnyango ohlukile oholela endaweni yokupaka, lapho kunendawo yokuhlala encane okwabelwana ngayo ...
Kuyindawo ekahle, futhi enendawo ekahle yokuphumula ekuhambeni ogwini oluhle lwendawo ...
Ngaphezu kwalokho, kufanelekile teleworking !!
4.68 · 71 okushiwo abanye
Isikhala sitholakala ngamamitha angu-300 ukusuka olwandle, endaweni enhle futhi ephephile kakhulu futhi kude nje nokuphithizela komgwaqo omkhulu, lapho uzojabulela khona ukuthula okuningi ... Ngaphezu kwalokho, uzoba ngaphansi kwamamitha angu-500 ukusuka. nezitolo ezinkulu, zokudla kanye ezihlukahlukene kusukela tour opharetha ukudoba ezemidlalo, diving kanye snorkel, plus block izinkambo nokuningi ...
Ibungazwe ngu-Ana Iris
Ngizohlala ngikulungele ukuphendula okukukhathazayo, nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Cabangela ukuthi angikhulumi isiNgisi, nokho, ngemilayezo yombhalo (kungaba ngomakhalekhukhwini noma ngengxoxo ye-Airbnb) ngokuqinisekile sizoqondana kahle;)
Ngizohlala ngikulungele ukuphendula okukukhathazayo, nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Cabangela ukuthi angikhulumi isiNgisi, nokho, ngemilayezo yombhalo (kungaba ngomakhalekhukhwi…
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa Brasilito - Cabo Velas - Santa Cruz namaphethelo